မေမေ့မျက်နာခွဲစိတ်ပြီးတွေ့ရပုံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » မေမေ့မျက်နာခွဲစိတ်ပြီးတွေ့ရပုံ
Posted by သော်ဇင် (လွိုင်ကော်) on Feb 2, 2013 in Health & Fitness | 22 comments
ကိုသော်ဇင်ရေ တော်တော် ဖြစ်သွား တာပါပဲလား ။တကယ်ကို စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်။ အမေ ကို ဂရုစိုက်ပါ၊ အားပေး ပါ။
ဒီလောက် ဒဏ်ရာ ပြင်း တာ ယာဉ်လိုင်း ကို တရား စွဲ ဖြစ်အောင် စွဲပါ။ ကိုယ် တရား စွဲ တဲ့ အချိန် ဒဏ်ရာ သက်သာသွား ရင် အမှု က ပေါ့ သွား နိုင် တော့ အဲလို ဓါတ်ပုံ ရိုက်ယူ ထား တာကောင်း ပါတယ်။သက်သေ ဖြစ်တာပေါ့ ။
စိတ်မကောင်းလိုက်တာ ၊ ကိုသော်ဇင်ရေ ။
ပုံကြည့်ရသလောက်တော့ ၊ အသက်ကိုတော့ အန္တရာယ် ရှိပုံမရပါဘူး ။
အဆိုးတွေ ပြီးရင် ၊ အကောင်းတွေ လာမယ်လို့ အားတင်းထားပါ ခင်မျ ။
တော်သေးတာပေါ့ အသက်အန္တရယ်မရှိတဲ့အပြင် ကိုသော်ဇင်လဲ ဘာမှမဖြစ်ပေလို့။
ချုပ်ထားတာ အချက်ပေါင်းများစွာ နဲ့ မြင်ရတာ အရမ်းပဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ် ။ အပြင်လူ တစ်ယောက်အနေနဲ့တောင် ရင်ထဲအတော်မကောင်းဖြစ်တာ …သားဖြစ်သူဆို ရင်ထဲက ဖီလင် စာရေးချပြလို့တောင် ရမယ်မထင်ဘူး ။
အမှုအတွက်တော့ မေးကြည့်ပြီး ပြန်ပြောပေးပါဦးမယ် … ။
စိတ်မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာ။ အမြန်ဆုံး ပျောက်ကင်းချမ်းသာ သက်သာစေဖို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ။
အမြန်ဆုံး သက်သာ ပြန်လည်ကောင်းမွန်သွားပါစေ
အချက်ပေါင်းများစွာ ချုပ်ထားရတာပဲ …
မျက်နှာမှာမှ ဖြစ်ရတယ်လို့ဗျာ .. စိတ်မကောင်းလိုက်တာ ..
မျက်နှာမှာဖြစ်တာတော်တော် ဆိုးပါတယ် နစ်နာမှုနဲ.ပါတ်သက်ပြီး သူတို.ဘက်က ဘာမှလာပြီးမလုပ်ပေးဘူဆိုရင် မဖြစ်သင်.ပါဘူး အသက်အန္တရာယ် မဖြစ်တာကိုပဲ အဆိုးထဲးကအကောင်းပေါ.ဗျာ..အမှုကိစ္စနဲ.ကတော.အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ကျွှန်တော်သိသလောက် အကြံပေးပါ့မယ်ဗျာ
ဒါ့အပြင် အကူအညီ ထိရောက်စွာ မပေးနိုင်တဲ့အတွက် ပိုပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်…
ဂေဇက်ရွာသူရွာသားများရဲ့ အားပေးတတ်တဲ့စိတ်တွေက လေးစားစရာပါ..။
အရမ်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ် ကိုသော်ဇင်ရေ။ အကောင်းပကတိပြန်ဖြစ်ဖို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ။
အမြန်ဆုံး.ကျန်းမာ ပါစေ..လို့..ကျွန်တော်တို့အားလုံး..ဆုတောင်းပေးလျက်ပါဗျာ ။
အမြန်ဆုံး သက်သာပြီး ဆေးရုံက အမြန်ဆုံး ဆင်းနိုင်ပါစေ
ရန်ကုန်က အဖွဲ့ တွေလဲ တစ်ခုခုကူညီနိုင်ရင်ကောင်းမယ်
ဦးပါ. အန်တီလေး တို.့တစ်ခုခု စီစဉ် ပေးပါဦး
ယခင်စာဖတ်မိတုန်းက ဒီလောက်ကြီးမထင်မိဘူး။ စိတ်မကောင်းပါဘူးသော်ဇင်ရေ။ ဒီတနင်္ဂနွေ ရွေတိုက်စိုး မန္တလေးသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ ကုိုယ်တတ်သလောက်ငွေနည်းနည်းပါးပါးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နည်းတယ်များတယ်သဘောမထားပါနဲ့သော်ဇင်ရေ။
ကိုသော်ဇင့်မိခင် ဓါတ်ပုံကိုကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်း ဖြစ်မိလို့ကြာကြာတောင် မကြည့် နိုင်ပါဘူး။
အမေချစ်တဲ့ သားမို့ ကိုသော်ဇင်ရင်ထဲ ဘယ်လောက်ရှိနေမယ်ဆိုတာ ၀င်ကြည့်စရာမလိုပဲ သိနှိုင်ပါတယ်။
ပုံကြည့်ရတာ စိုးရိမ်စရာ အနေအထားမရှိတော့ပေမယ့် အားလုံးကောင်းတဲ့အထိ အချိန်ယူကုရမယ်ထင်ပါတယ်။
တစ်ကယ်လို့များ ငွေရေးကြေးရေး သိပ် အခက်အခဲ နဲ့ ကြုံတွေ့ ရရင် စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုမှ သဘောမထားပဲ ကျွန်တော့်မေးလ် (akhaingswe@gmail.com) ကို ဆက်သွယ်ကူညီခွင့်ပေးပါ တတ်နှိင် သလောက်ကူညီမယ်ဆိုတာ ဂတိပြုပါတယ် ခင်ဗျား။
ခုလိုလာရောက် comment ရေးသားဆုတောင်းပေးကြပါသော မန်ဘာများအား များစွာ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်။ ရန်ကုန် ကမန်ဘာများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ တနင်းလာ သို့မဟုတ် အင်္ဂါနေ့ မှာ လွိုင်ကော်ကို ခဏ ပြန်ပြီ အမှုကိစ္စရှင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မန္တလေးဆေးရုံကြီးတွင် မိခင်ဖြစ်သူနှင့်အတူ အဒေါ်နှစ်ယောက်ကျန်ရစ်မှာဖြစ်ပါကြောင်း လူနာ သတင်းမေးမည့် မန်ဘာ များကို ကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နှင့်တွေ့ချင်သော မန်ဘာများအနေနဲ့ လွိုင်ကော်ကပြန်ရောက်မှသာ တွေ့ နိုင်ဖြစ်ပါကြောင်း ကြိုတင် အသိပေးလိုပါတယ်။ ကျွန်တော့်မိခင်ကိုတော့ လာရောက်တွေ့ဆုံ သတင်းမေးလိုပါက မေးနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျား။မန်းကမန်ဘာ များနဲ့ မန်းကိုပြန်ရောက်မှ တွေ့ဆုံရန်စဉ်းစားထားပါတယ်။ ဆက်သွယ်လိုပါက naymyoaung066@gmail.com ကိုဆက်ငွယ်နိုက်ပါတယ်။
မြန်မြန် သက်သာပျောက်ကင်းပါစေလို့ 
ကိုသော်ဇင်ရေ မြင်ရတာစိတ်မကောင်းပါဘူး… ဒါပေမဲ့ ပြီးလို့ ပလတ်စတစ်ဆာဂျရီပြန်လုပ်လိုက်ရင်တော့ အရင်ထက်ကတောင် ပိုချောသွားမယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်… ဒီလိုပဲ ကောင်းတဲ့ဘက်က ရှာကြံတွေးကြည့်တာပါ..
ကိုသော်ဇင် ရဲ့ မေမေ အပြန်ဆုံး ပြန်လည် ကောင်းမွန်ပါစေလို့
စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ ဘဲ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်…..
ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကို သော်ဇင်ရယ် ကျတော် တော်တော်ကို စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ် ဗျာ တကယ်ပါ။ဒါပေမယ့်ကို သော်ဇင်ရယ် လူဆိုတာ ဖြစ်ချိန်တန် လာရင်ဖြစ်ရတတ်တယ်မဟုတ်လားဗျာ သိပ်တော့လည်းဝမ်းနည်းမနေပါနဲ့နော် ။